(ပထမပိုင်း) – DVB
ကျွန်တော်ရဲ့ နွေဦးနေ့ရက်များ (ပထမပိုင်း)
မြိတ်မြို့က ပြည်သူတွေဟာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၇ ရက်မြောက်တဲ့နေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်က စပြီး တခြားဒေသတွေလိုပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ စည်းကမ်းရှိရှိ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ သတင်းသမားတွေအနေနဲ့လည်း ဒီအာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမယ် လူထုဘက်ကနေ ဘယ်လိုရပ်တည်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကို ဒေသတွင်း သတင်းသမားတွေနဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ တချို့သတင်းမားတွေကတော့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စိုးရိမ်စိတ်တွေကြောင့် သတင်းအလုပ်ကို ဆက်မလုပ်ကြတော့သလို တချို့ကျတော့ စစ်တပ်ကို ထိခိုက်စေမယ့် စကားလုံးတွေကိုရှောင်ရှားပြီး ရေးသားလာတာတွေ့ရတယ်။ ဒီအတွက်လည်း သူတို့ကို အပြစ်သွားပြောလို့မရပါဘူး ကျွန်တော်တို့ သတင်းလောကမှာ စကားတစ်ခုရှိပါတယ် မိမိအသက်ထက်အရေးကြီးတဲ့သတင်း ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်း အမြဲအမှတ်ရနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ သတင်းသမားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီး ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ် လူထုတွေရဲ့ လိုလားတောင်းဆိုမှုတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို အားလုံးသိအောင် လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူထားတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အားလုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကြွေးကြော်သံတစ်ခု တင်လိုက်တယ်။ အဲဒီကြွေးကြော်သံကတော့ “I’m Journalist” “သင်တို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်ပြောပြဖို့ ကျွန်တော်တို့ အမြဲရှိနေမယ်” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတစ်ခုကို ကျွန်တော်ရေးသားလိုက်ပြီး အဲဒီ စာသားပါ အင်္ကျီတွေကို ရိုက်နှိပ်လို့ ဒေသတွင်းမှာ အလုပ်ဆက်လက် လုပ်နေကြတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို ဝေငှခဲ့တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘယ်သူ့စေခိုင်းချက်အရ လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ မိမိအသိစိတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင် ကျွန်တော်တို့ဒေသ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကို ကမ္ဘာကြီးကို သိအောင် ပြန်ပြောပြဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူထားပြီး ဒီလိုသတင်းတွေကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့အသံကို ကမ္ဘာကြီးက ပိုမိုသိရှိပြီး လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို အမြန်ဆုံး ပြေလည်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ထားလို့ပဲဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ နောင်တချိန်မှာ သမိုင်းမှတ်တမ်းတခုခု အနေနဲ့ကျန်ရှိခဲ့မှာဖြစ်ပြီး နောင်အနာဂတ် မျိုးဆက်တွေလက်ထက််အထိ အာဏာရှင်စနစ်ဟာ ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးဝါးခဲ့တယ်၊ ရက်စက်ခဲ့တယ်၊ ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိရှိမှသာ အနာဂတ်မှာအာဏာရှင်မျိုးဆက်တွေ အမြစ်ပြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ သတင်းသမား အခန်းကဏ္ဍကနေ အလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သတင်းထောက်တွေအတွက် တခြားလိုအပ်တဲ့ Press ဦးထုပ်တွေ အကာအကွယ် မျက်မှန်တွေကိုတော့ သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့တချို့က ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပေးခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့ ကျေးဇူးတင်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ညီမလေးတစ်ယောက် အကူအညီရယူပြီး နှစ်ယောက်သား စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နေ့စဉ်ဆိုသလို ဒေသတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းရာတွေကို ရုပ်သံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တာ သတင်းတွေရေးသားတာတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်က သတင်းတင်ဆက်သူဖြစ်ပြီး ညီမလေးဖြစ်သူကတော့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် တင်ဆက်နေတဲ့အချိန် ကင်မရာ ရိုက်ကူးပေးသူအနေနဲ့ သတင်းတွေကို ရယူခဲ့ကြတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ကနေ စတင်ပြီး မြိတ်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ၊ ရွေးကောက်ပွဲနည်းလမ်းအရ သူတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရကို အာဏာပြန်လည်အပ်နှင်းပေးဖို့ အပါအဝင် မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့ကို ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် ညပိုင်းကနေစပြီး မြိတ်မြို့က လူထုလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့နေအိမ်တွေကို စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ညအချိန်မတော် အင်အားသုံးပြီး အတင်းအဓမ္မ ဝင်ရောက်ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရှာဖွေနေတဲ့ လူထုဦးဆောင်သူတွေကို နေအိမ်တွေမှာ မတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ နေအိမ်မှာရှိတဲ့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ သားသမီးငယ်တွေကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အစောပိုင်း ကာလကတည်းက အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်အတိုင်း ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ ပြုမူဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကို တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု လက်ပါးစေတွေဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်က နေစပြီး မြိတ်မြို့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို သတိပေး လူစုခွဲခိုင်းတာမျိုး အဆင့်ဆင့်မဆောင်ရွက်ဘဲ အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းတွေတိုက်ရိုက်သုံးပြီး နှိမ်နှင်းမှုတွေ ပြုလုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ သေနတ်သုံးပစ်ခတ်ပြီး နှိမ်နှင်းခဲ့ကြသလို အဲဒီနေ့မှာပဲ လူပေါင်း ၂၀ ဝန်းကျင်လောက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ အယောက် ၃၀ ထက်မနည်း ခဲကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကိုခံခဲ့ရလို့ ဆေးရုံတွေမှာ ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီလို အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းအသုံးပြုပြီး နှိမ်နှင်းလာတဲ့အတွက် မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ ပြည်သူတွေဟာ လမ်းပေါ်ထွက် အင်အားပြတဲ့နည်းလမ်းမျိုးအသုံးမပြုတော့ဘဲ ပြောက်ကျားနည်းလမ်း အသုံးပြုပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါနေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ သတင်းရယူနိုင်ဖို့အတွက် ညီမလေး ဖြစ်သူနဲ့အတူ မြိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာ ကားတစ်စီးနဲ့လိုက်လံလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရင်း မြိတ်မြို့ မြို့သစ်ဈေးနား အရောက်မှာ စစ်ကား အများအပြားကင်းလှည့်လာတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီစစ်ကားယာဉ်တန်း မြို့တစ်ပတ် ပတ်မောင်းခဲ့ပြီး အဲဒီယာဉ်တန်း မလှမ်းမကမ်းကနေ ကျွန်တော့်ကားက တောက်လျောက် လိုက်လာခဲ့တယ်။ သတင်းသမားရဲ့ အတွေ့အကြုံအရရော မသိစိတ်အရရော မကြာခင်တစ်ခုခု ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုလဲ ကြိုတင်သိရှိနေခဲ့ပြီး ဘေးမှာလိုက်ပါလာတဲ့ ညီမလေးဖြစ်သူကိုတောင် ကြည့်နေ မကြာခင် တစ်ခုခု ထူးလိမ့်မယ်လို့ ပြောပြဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ စစ်ကားယာဉ်တန်းဟာ မြိတ်မြို့ အင်းလေးမြိုင်မီးပွိုင့်လမ်းဆုံ အရောက်မှာ ပြောက်ကျား ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ထိပ်တိုင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေဟာ စစ်ကားတွေ ပြန်ထွက်လို့မရအောင် လမ်းတွေကို နီးစပ်ရာ ပစ္စည်းတွေယူဆောင်ကာ ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီး စစ်ကားပေါ်မှာပါတဲ့ စစ်သားတွေကတော့ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ လမ်းပိတ်ထားတဲ့ အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေက လမ်းတွေကို အဆင့်ဆင့်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက် စစ်ကားတွေက ပြန်လည်ထွက်ခွာလို့မရတဲ့အခါမှာတော့ ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ နေအိမ်တွေအတွင်းကို တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အင်အားသုံးပြီး ဝင်ရောက် ဖျက်ဆီးတာ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကို ဖမ်းဆီးတာ ခဲကျည် အသုံးပြုပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့တာတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီလို စစ်တပ်ယူနီဖောင်းနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားတဲ့ သူတွေက ရပ်ကွက်အတွင်း ဝင်ရောက် အကြမ်းဖက်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်က ညီမလေးဖြစ်သူနဲ့အတူ သတင်းတိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလို တိုက်ရိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက နေအိမ် တအိမ်အတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့ မောင်ဖြစ်သူကို ရိုက်နှက်ပြီး ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ကားပေါ်ကို မခေါ်ဆောင်ဘဲ ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို အဆိုပါ အမျိုးသမီးရဲ့နေအိမ်ကို တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အဲဒီနေအိမ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံ ကျပ်ငွေ လေးသိန်းအပါအဝင် ဘဏ်ကတ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးကိုမေးမြန်းပြီး တိုက်ရိုက်သတင်းထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို မေးမြန်းတင်ဆက်ပြီးတဲ့နောက် စစ်ကားတွေလည်း ရပ်ကွက်အတွင်းက ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတို့ သတင်းရိုက်ကူးမှုအစီအစဉ်ကို ရပ်နားပြီး နေအိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ကာဒီနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအခြေအနေတွေကို ခြုံငုံပြီး သတင်းတွေထပ်မံ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
မတ်လ ၁ ရက် နေ့လယ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ရိုက်နှက်ခဲ့တာ ပိုက်ဆံ လေးသိန်း ယူသွားတာ စတဲ့အကြောင်းအရာဟာ အွန်လိုင်းမှာ ကြည့်ရှုသူအရမ်းကို များပြားနေတဲ့အတွက် သတင်းသွားရောက် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မိမိရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းကြည့် ပရိသတ်တွေအပြင် မိတ်ဆွေတချို့ကပါ ဆက်သွယ်ပြီးသတိပေးလာကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ဆန္ဒပြ အင်အားစုတွေကို ဖြိုခွင်းတဲ့နေရာမှာ ငွေကြေးယူဆောင်သွားတယ် ဆိုတဲ့သတင်းက သိပ်ပြီးမရှိသေးတဲ့အတွက် မိမိသတင်းက အဲဒီအချိန်ကာလက သတင်းဦးဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးကလည်း စိတ်ဝင်စားကြတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လို အချိန်ကာလမျိုးဆိုရင်တော့ မိမိသတင်းဟာ အဲဒီအချိန်ကလောက် စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို ဝိုင်းဝန်းသတိပေးခဲ့ကြပေမဲ့ မိမိအနေနဲ့ တခြားနေရာကို မရှောင်တိမ်းဘဲ နေအိမ်မှာပဲ ပုံမှန်အတိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ အခုလို နေခဲ့တာကလည်း အချက် နှစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အချက်က မိမိအနေနဲ့ ပြစ်မှုတစုံတရာ ကျူးလွန်ထားတာ မရှိတဲ့အပြင် သတင်းသမား အလုပ်ကို သတင်းသမားတယောက် အနေနဲ့ ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ မိမိလုပ်ရပ်တွေအတွက် မိမိကိုယ်မိမိတာဝန်ယူ တာဝန်ခံနိုင်ပြီး ဖြစ်လာသမျှ အခြေအနေတွေကို ရဲရဲရင်ဆိုင်မယ်လို ဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာ အခုလို သတင်းတွေကို တင်ဆက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ တစ်ချက်က နေအိမ်မှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ လာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန် ကျွန်တော့်ကို မတွေ့ရင် ကျွန်တော့်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ၂ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ သမီးငယ်ဖြစ်သူ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ အတူနေထိုင်တဲ့ ညီမဖြစ်သူတို့ကို ဘယ်လိုတွေများ ဒုက္ခပေးကြမလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က ရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အရှေ့ပိုင်းမှာ သူတို့ပြုမူနေကျအတိုင်းဖြစ်တဲ့ အဖေမရှိရင် သမီးဖြစ်သူဖမ်း၊ သားဖြစ်သူကိုဖမ်းဆိုတဲ့ ကိစ္စကလည်း လက်တွေ့မှာရှိနေတော့ မိမိအနေနဲ့ အရာအားလုံးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်မှ မရှောင်တိမ်းပဲ နေအိမ်မှာသာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့များ မိမိကို လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရင် ဘယ်လိုတွေ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကို ခေါင်းထဲမှာလည်း တန်းစီပြီး အဖြေထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ ၁ ရက် ညပိုင်း ၁၀ နာရီဝန်းကျင်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အခြေအနေတွေက ခါတိုင်းနဲ့ မတူပဲ ထူးခြားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီကာလက ည ၈ နာရီကျော်ရင် ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားတာကြောင့် လမ်းပေါ်မှာ လူသူကင်းမဲ့နေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်း တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ အရင်ညတွေက အခုလိုအချိန်ဆိုရင် ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့ လမ်းမကြီးပေါ်ကနေ စစ်ကားယာဉ်တန်းတွေ အများအပြား ကင်းလှည့်ပြီး သွားတာကို တွေ့မြင်ရရင် ကျွန်တော်အပါအဝင် အနီးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေက ထွက်ချောင်းကြသလို ကျွန်တော်ကလည်း သတင်းမှာ အသုံးပြုလို့ရနိုင်အောင်လို့ နေအိမ်အပေါ်ထပ် ဝရန်တာကနေ မှတ်တမ်း Movie တွေကို ထွက်ပြီး ရိုက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ညမှာတော့ တီအီး စစ်ကား တစ်စီးတည်းသာ နေအိမ်ရှေ့ကနေ ဖြတ်သွားတာကို တွေ့ရပြီး အဲဒီကားပေါ်မှာတော့ စစ်သားတွေအပြည့် ဘေးခုံတန်းကိုခေါက်တင်ထားပြီး အထဲမှာ စစ်သားတွေ အပြည့် ထိုင်လိုက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲ တစ်ခုခုတော့ထူးပြီဆိုပြီး သိလိုက်ရတယ်။ နောက်မှသိရတာက အဲဒီကားပေါ်မှာပါတဲ့ စစ်သားတွေက ကျွန်တော်အိမ်ကို ဝင်မစီးခင်အချိန်မှာ ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ် အနီးနားမှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက် မီးသတ်စခန်းတွေကို ကြိုတင်သွားဝိုင်းထားပြီး ကျွန်တော့်ကို လာဖမ်းချိန် လာမကူနိုင်အောင် သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားတယ်လို့ပြန်သိခဲ့ရတယ်။
အဲဒီလို စစ်ကားတစ်စီးဖြတ်သွားပြီးလို့ နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာ ကားသံတွေ ထပ်မံ ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အပေါ်ထပ်ကနေ လှမ်းကြည့်တော့ စစ်သားတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ တီအီးကား ၄-၅ စီးလောက်နဲ့ ရဲကား ၄ စီးလောက်ကို နေအိမ်အပေါ်ထပ်ကနေ လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီယာဉ်တန်းက ကျွန်တော့် အိမ်ရှေ့မှာ ကားတွေအားလုံး ထိုးရပ်လိုက်ပြီး ကားပေါ်ကနေ စစ်တပ်ဝတ်စုံအပြင် ရဲဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူတွေ အများအပြားဆင်းလာတာကိုတွေ့ရရချင်းပဲ ကျွန်တော် သိလိုက်ပြီ ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်ပြီဆိုတာကို။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်တော်က နေအိမ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးဖြစ်သူကို အိပ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ဖုန်းယူလာခဲ့ဖို့ပြောရင်း အပြင်မထွက်နဲ့ သမီးလေး အနားမှာနေဆိုပြီး လှမ်းမှာလိုက်တယ်။ သမီးလေးက အခုမှ ၂ နှစ်တောင် မပြည့်သေးဘူးလေ သူ့ကိုထိခိုက်သွားလို့မဖြစ်ဘူး ပြီးတော့ သူက အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတာ အပြင်က ပဋိပက္ခတွေကြောင့် သမီးလေး လန့်ပြီးနိုးသွားမှာလည်း စိုးရိမ်နေမိတယ်။ တစ်အိမ်လုံးမှာမှ ယောက်ျားလေးဆိုလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဒါကြောင့် ဒီလူတွေ ဘာမှမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရမှာလဲ ကျွန်တော့်တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော် ကြိုတွေးထားတဲ့အတိုင်း မခေါ်ပဲရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကတော့ ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့ကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
Any Questions? ကချင်ပြည်နယ်အစီအစဉ် (ပထမပိုင်း)
၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးကြမယ့် First time voters လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး ပါတီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို ဒီဗွီဘီက တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတစ်ပတ်အတွက် ရွေးချယ်ထားတာကတော့ ကချင်ပြည်နယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကတော့ ၁၂ နေရာရှိတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကတော့ ၁၈ နေရာရှိတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကတော့ နေရာ ၄၀ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာ ၄၀ ထဲမှာတော့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ၄ နေရာ ပါဝင်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေဟာ ၈၇၀၀၀၀ကျော် ရှိပြီးတော့ မဲပေးခဲ့တဲ့ လူဦးရေကတော့ ၆ သိန်းနီးပါး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ၂၀၁၅ တုန်းက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပါတီက ၁၆ နေရာရှိပြီးတော့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီ ၄ ပါတီရှိပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ဆိုရင်တော့ ၁၄ ပါတီ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီ ၃ ပါတီ ရှိပါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပါတီဟာ ၁၅ ပါတီ ရှိပြီးတော့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီဟာ ၆ ပါတီ ရှိပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် ၂၀၁၅ တုန်းက မြို့နယ် ၁၁ မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၂၁၁ ခုမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုလာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်မှာ မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူ ၁ သန်းကျော်ရှိပြီးတော့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲပေးမယ့် လူဦးရေကတော့ ၁၇၀၀၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ မသန်စွမ်း မဲဆန္ဒရှင်ကတော့ ၁၅၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ မဲရုံအရေအတွက်ကတော့ ၈၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီဗွီဘီက စစ်တမ်းတစ်ခု ကောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကို ဖြေဆိုခဲ့တဲ့သူတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားကတော့ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားပြီး အမျိုးသမီးကတော့ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ LGBT ကတော့ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားပါတယ်။ ဖြေဆိုခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့သူကတော့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှာပဲနေပေမယ့် ရန်ကုန်မှာအလုပ်လာလုပ်နေတဲ့သူကတော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဖြေဆိုထားတဲ့ အုပ်စုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အသက် ၂၅ ကနေ ၃၅ က ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတယ်ပြီး အသက် ၁၆ ကနေ ၂၅ ကတော့ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စစ်တမ်းကို ဖြေဆိုထားတဲ့သူတွေထဲမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲပေးမယ့် သူတွေကတော့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရပြီး မသန်စွမ်း ဖြေဆိုထားတာကတော့ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းကို ဖြေဆိုထားသူတွေထဲမှာ လူမျိုးအုပ်စုတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးကတော့ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးထဲမှာ ကချင်ပါတယ်၊ ကချင်ရခိုင်ပါတယ်၊ ကချင်ရှမ်း ပါပါတယ်။ ရှမ်းကတော့ ၆ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတယ်။ ဂေါ်ရခါးကတော့ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗမာကတော့ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားကြပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းထဲမှာ မေးခွန်းလေး ၂ ခု ထည့်ပြီးတော့ မေးခဲ့ရာမှာ ပထမဦးဆုံး မေးခွန်းကတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အဓိကပြဿနာတွေကတော့ ဘာတွေလဲဆိုပြီး မေးခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းကို သူတို့ ဘယ်လိုဖြေကြလဲဆိုတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးက အများဆုံးရှိတယ်ဆိုပြီး ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားကြပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကတော့ တန်းတူညီမျှ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ် အခြားဆိုတာကတော့ စီးပွားရေးပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါပါတယ်။ ဒါကတော့ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ ကချင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို နှောင့်ယှက်နေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းကိုတော့ စစ်တမ်းဖြေဆိုထားတဲ့သူ ထက်ဝက်ကျော်က ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှု မရှိခြင်း ဆိုပြီး ဖြေဆိုထားတယ်။ ဒါကတော့ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာက ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ နောက်ပြီးတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိခြင်းကတော့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါက မြို့ပေါ်မှာ သွားရောက်ကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေ၊ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေဖြစ်ပြီး ဒီလိုစစ်တမ်းတွေ ကောက်ယူခဲ့ရာမှာလည်း ဆက်သွယ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဒေသတွေက လွဲလို့ လက်လှမ်းမီသလောက်ကို စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းတွေအရ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ လီဆူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) တို့ကို Any Questions? အစီအစဉ်မှာ ဖြေကြားပေးဖို့ ဒီဗွီဘီက ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ပါတီတွေထဲက လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးလီပေါရဲက ပါတီမိတ်ဆက်စကားပြောကြားရာမှာ DVB ရဲ့ Any Questions? မှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတဲ့အကြောင်းနဲ့ ခဏနေကျ မေးတဲ့အခါကျရင် ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေ၊ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်း ချပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဦးသိန်းထွန်းကတော့ “ ကျနော်တို့ပါတီကတော့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ပါတီရဲ့ နာမည်အရလည်း တစ်လုံးခြင်းအရ အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပါတီဟာ လူမျိုးပေါင်းစုံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပါတီ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ စုဖွဲ့ထားတဲ့ ပါတီဖြစ်ပြီးတော့ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်သွားမယ့်ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ပြောပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီက လူငယ်ရေးရာ တာဝန်ခံ ဦးနော်ခုန့်ကတော့ “ကျနော်တို့ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီဆိုတာက အခု ဖြစ်ပေါ်လာတာ စုပေါင်းထားတဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မှတ်ပုံတင်ပြန်ရတာ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီပါတီကို ကချင်ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ နောက်ထပ် မနောတိုင်ပါတီလို့ သိကြတဲ့ UDPKပါတီ၊ ပြီးရင် KDP - ကချင်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီရယ်၊ UNFDP ဆိုတဲ့ ပါတီလေးခုကနေပြီးမှ ဖျက်သိမ်းပြီးမှ ပါတီတစ်ခုတည်း ပေါင်းစည်းထားတဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကျနော်တို့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၁၁ မြို့နယ်စလုံး ကျနော်တို့တွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ၆၈ နေရာစလုံးကို ကျနော်တို့ ယဉ်ပြိုင်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။”လို့ ပြောပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကချင်ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးသန့်ဇော်လတ်ကတော့ “ ကျနော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ အားလုံး သိထားတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာသိနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက် အထူးကျနော် မိတ်ဆက်ပြောကြားဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျနော်တို့ပါတီကတော့ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုပါတီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေ။”လို့ပြောပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ အွန်လိုင်းကနေမေးမြန်းကြတဲ့ လူငယ်တွေအထဲက ပထမဆုံးမေးမြန်းခဲ့တဲ့ မချမ်းနန်က “ကျမက NLD ကို မေးချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ NLD အနေနဲ့ အခုလာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အစိုးရထပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ချက်ရှိပါသလား။ တကယ်လို့ ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်အဆင့် အတိုင်းအတာအထိ မျှော်လင့်ထားပါသလဲ” လို့ မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးသန့်ဇော်လတ်က “မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့၊ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ အများကြီး လုပ်ဆောင်နေတာ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ နောက်အစိုးရ တက်လာတဲ့အခါမှာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ကတော့ ယုံကြည်ချက်အပြည့် ရှိပါတယ်”လို့ဖြေကြားသွားပါတယ်။ မေးခွန်းမေးမြန်းသူ နောက်တဦးဖြစ်တဲ့ မကိုင်ထွဲကတော့ “ ကျမကတော့ KSPP ပါတီကို မေးချင်လို့ပါရှင့်။ KSPP ရဲ့ မူဝါဒ ၁၂ ချက်ရှိတဲ့အထဲက နံပါတ် ၆ အရ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေးကဏ္ဍကို ပြည်သူတွေအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ပေးမယ်လို့ သူတို့က ပြောထားတယ်ပေါ့။ အခုလောလောဆယ် ဖြစ်နေတဲ့ ငှက်ပျောခြံကိစ္စဆိုရင် ဝန်ကြီးတွေက ပြောကြတယ်၊ အဲဒါက ပြည်သူလူထု အလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်အောင် ဆိုပြီးတော့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် KSPP ပါတီက တကယ်တမ်း ပြည်သူလူထု အလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်အောင် ငှက်ပျောလုပ်ခြင်းက သေချာပါသလားဆိုတာ တစ်ချက် မေးချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မူဝါဒ နံပတ် ဘယ်လောက်လဲ မမှတ်မိတော့ဘူး၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါလာနိုင်အောင် ဆိုပြီး ပါပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ ပါတီထဲမှာ အခုလောလောဆယ် အမျိုးသမီး ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲပေါ့။ တကယ်လို့ သူတို့ အနိုင်ရတဲ့ပါတီ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အခုလောလောဆယ် ဘယ်အဆင့်ထဲမှာ ရှိလဲ၊ ဥပမာပြောရရင် ပါတီခေါင်းဆောင်တို့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ အပိုင်းမှာ အမျိုးသမီး ဘယ်နှစ်ယောက် ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကို ကျမမေးချင်ပါတယ်” လို့ မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးနော်ခုန့်က “ မိန်းကလေးမေးမြန်းပေးတာကို ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ ခုနက ညီမလေးမေးသွားတယ်။ KSPP ကတော့ လက်ရှိမှာတော့ ကျနော်တို့ ငှက်ပျော စိုက်ပျိုးရေး မလုပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့က လက်ရှိမှာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မူဝါဒတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ငှက်ပျောနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် ငှက်ပျောပြဿနာက တော်တော်လေးကို အများကြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အလုပ်အကိုင်ရနိုင်တဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး ရှိသလို ဒီထဲကနေပြီး ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားနေရတဲ့သူတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ နားလည်တာကတော့ ငှက်ပျောခြံကြီးပဲ ဖြစ်လာတာကတော့ ပြဿနာရှိပါတယ်။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲတာ၊ တအားပူလာတာတွေကအစပေါ့နော်။ ဒါက ကျနော်တို့တတွေ သေသေချာချာ စီမံကိန်းချပြီးမှ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ငှက်ပျောကနေပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ တကယ်ရော အလုပ်အကိုင် ဘယ်လောက်အထိ ရရှိနေသလဲဆိုတာတွေကို ကျနော်တို့ တိတိကျကျ ဒေတာကောက်ခံနေပါတယ်။ ဒေတာကောက်ခံထားတာတွေလည်း ကျနော်တို့မှာ ရှိပါပြီ။ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးသော ဒေသခံတွေ အကျိုးရှိအောင် ကျနော်တို့ လုပ်သွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်”လို့ ဖြေကြားသွားပါတယ်။ “နောက်ထပ် အမျိုးသမီးများနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာ ပြန်ဖြေရရင် ကျနော်တို့ ပါတီမှာ ဥက္ကဋ္ဌ ၅ ဦးရှိပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌ ၅ ဦးမှာ ၂ ဦးက အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌ ၂ ဦးစလုံးဟာ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အမျိုးသမီးများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်က အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ဆရာမဒေါ်ဒွဲဘူ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ (၁) ကနေပြီးတော့မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နောင်မွန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ (၄) ဖြစ်တဲ့ ဆရာမဒေါ်ဘောက်ဂျာကနေပြီးတော့မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများကို အထူး ဦးစားပေးတဲ့ မူအရ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုကို အမြဲတမ်း အလေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ် လူငယ်ထဲကနေပြီး ပွဲထုတ်လာတဲ့ အထဲမှာလည်း အမျိုးသမီး နှစ်ဦးပါပါတယ်။ ကျနော်တို့က အမျိုးသမီးများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်တယ်၊ နံဘေးကနေပြီး အကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေကို အမြဲတမ်း ကျနော်တို့ လက်ခံတယ်၊ ဒီအပေါ်မှာ ဆွေးနွေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမျိုးသမီးများ ကဏ္ဍဟာ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ မူဝါဒမှာ ထည့်သွင်းပေးပြီးမှ နေရာပေး ဦးစားပေးဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောကြားချင်ပါတယ်” လို့ပြောပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင် ပါတီတွေကို မေးမြန်းတဲ့နေရာမှာ တိုက်ရိုက်မေးမြန်းတဲ့ လူငယ်တွေ ရှိသလို၊ ဗွီဒီယိုတွေနဲ့ ကြိုတင်ရယူထားတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ်စာတွေနဲ့ ပေးပို့ပြီးမေးလာတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး ပဆီခေါန်နူးက မေးထားတာမှာ ကချင်ပြည်နယ်က လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါတီတွေအများကြီးထဲမှာမှ မဲပေးမယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေအတွက် ဘယ်လောက်အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာမလဲ။ ပြီးတော့ တခြားပါတီတွေထက် တမူထူးခြားတဲ့ အကြောင်းအရာ ဘာရှိမလဲဆိုပြီးတော့ မေးထားပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကို (ဒူးလေးပါတီ) ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးလီပေါရဲက “ကျနော်တို့ လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီထဲမှာ အခု လူကြီးတွေထက် လူငယ်တွေကို ပိုပြီးနေရာပေးလာတယ်။ အခု ကျနော်တို့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း လူငယ်တွေဟာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ သူတို့ကို နေရာပေးထားပါတယ်။ လူငယ်တွေဟာ အနာဂတ်ရဲ့ ကြယ်ပွင့်တွေ ဖြစ်တယ်၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ကျနော်တို့ သူတို့ကို အခုကတည်းက အပေါ်ကို တင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ ထူးခြားချက် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ပါတီအနေနဲ့တော့ ပါတီတစ်ခုလုံးမှာ လူငယ်ဟာ ကျနော်တို့ ဗဟိုကော်မတီထဲမှာပါသလို၊ မြို့နယ် အဆင့်ဆင့်သော နေရာတွေမှာလည်း လူငယ်ကဏ္ဍတွေ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့အားကို ရည်ရွယ်တဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်”လို့ဖြေပါတယ်။ ဒါကတော့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းထဲက First Time Voters လူငယ်တွေရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားသံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကချင်ပြည်နယ်လို့ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တာကြောင့် အဲဒီနေ့ကို ကချင်ပြည်နယ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ စီတာပူမနောကွင်းမှာ ပထမဆုံး သမ္မတဖြစ်တဲ့ စဝ်ရွှေသိုက်က ကချင်မနော အောင်ပွဲနေ့ကို စတင် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့ရောက်တိုင်း ကချင်ရိုးရာ မနောပွဲကို နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကြတာပေါ့။ ဒါ့အပြင် မြစ်ဆုံရဲ့ သဘာဝအလှတွေကြောင့်လည်း မြစ်ကြီးနားဟာ နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ပူတာအိုခရိုင်ဟာ တောင်ကုန်းတောင်တန်း၊ ချိုင့်ဝှမ်းတွေ၊ တောအုပ် မှိုင်းညို့ညို့တွေ ဝန်းရံနေတဲ့ ဒေသတစ်ခုပါ။ အမြင်အတွေးနဲ့တင် လွမ်းမောစရာ ဒေသတစ်ခုပါပဲ။ ရှေးကတော့ ရဝမ်ဒေသလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ ရှမ်းတို့ ဦးစွာရောက်ရှိ အခြေချခဲ့ရာ ဒေသပေါ့။ ခန္တီးကြီးလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ ရှမ်းလိုကတော့ ရွှေထွက်ရာဒေသပေါ့။ ပူတောင်းလို့လည်း ခေါ်တယ်။ ပူတောင်းကို အင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပြီး PUTAO လို့ ရေးရာကနေ ပူတာအို ဖြစ်လာခဲ့တာ။ အဲဒီမှာ ပထမဆုံး ခရိုင်ဝန် မစ္စတာဟတ်စ် အုပ်ချုပ်စဉ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဖို့စ်ဟတ်စ် ခံတပ်လည်း ရှိတယ်။ နှင်းဖုံးတောင်လို့ခေါ်တဲ့ ဂန်လန်ရာဇီ၊ ဖုန်ကန်ရာဇီ၊ ဖန်ကလန်ရာဇီနဲ့ ခါကာဘိုရာဇီ တောင်တို့ဟာ ပူတာအိုခရိုင်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ခါကာဘိုရာဇီတောင်ကတော့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အမြင့်ဆုံးတောင် ဖြစ်သလို၊ တိဘက်-မြန်မာ နယ်စပ်မှာရှိပြီး ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းနဲ့ ဆက်နေတာပေါ့။ ခါကာဘိုရာဇီတောင်ခြေမှာတော့ ရဝမ်၊ ယောယင်၊ လီရှော၊ လီဆူတို့အပြင် လူမျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်လုနီးနီး ဖြစ်နေတဲ့၊ တစ်ဦးတည်းသာ ကျန်တဲ့ ထရုံ လူသားမျိုးနွယ်ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့မနုဿပညာရှင်တို့အကြား ရင်သပ်ရှုမော၊ တအံ့တသြ ဖြစ်ခဲ့ရာ အထင်ကရနေရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောင်းပိုး၊ နွေမြက် ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆောင်းရာသီ တစ်ရာသီလုံး ပိုးတုံးလုံးဘဝကနေ နွေမှာ နွယ်ပင်အဖြစ် ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ ဆေးပိုးနွယ်ပင်လို့ ခေါ်တဲ့ ရှီးပုတီးတို့ ထွက်ရှိရာ ဒေသ။ စိုက်ပျိုးလို့မရ၊ မွေးမြူလို့လည်းမရ၊ အမြင့်ပေ တစ်သောင်းကျော်မှ တွေ့ရှိနိုင်တဲ့ ရှီးပုတီးဟာ ဈေးကွက်ဝင်ပစ္စည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဘူတန်၊ တိဘက်၊ နိပေါ၊ တရုတ်နဲ့ ပူတာအို ဒေသမှာပဲ တွေ့နိုင်တာပါ။ တကယ်တော့ ကချင်ပြည်နယ်ဟာ အလွန်ထူးခြားပြီး ပဟေဠိဆန်တဲ့ သဘာဝဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒေသတစ်ခုပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ လေယာဉ်တွေ တပ်ရင်းလိုက် ပျောက်ဆုံးရာ တရားခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်လို့ အမည်တွင်တဲ့ ပဟေဠိရေကန်ဟာလည်း အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာ နယ်စပ်မှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ အမွေဖြစ်တဲ့ လီဒိုလမ်းမကြီးဟာလည်း ရှင်ဘွေယံ၊ မိုးကောင်း၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်တို့ကို ဖြတ်ပြီး တရုတ်ပြည် ကူမင်းအထိ ရောက်တဲ့ လမ်းမကြီးပါ။ စတီးဝဲလ် လမ်းမကြီး၊ Burma Road လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလမ်းမကြီးကို ဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေကို အင်္ဂလန်နန်းရင်းဝန် ဝင်စတန်ချာချီက ဧရာမ သူရဲကောင်းကြီးတွေလို့ အမွှန်းတင်ခဲ့သလို၊ ဒီလမ်းမကြီးကို ဖောက်တော့ ရာသီဥတုက ဆိုးလွန်းတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်စစ်သား ၁၀၀၀ ကျော် ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြရတယ်။ တာဝန်ခံ လမ်းဖောက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက အရာရှိတွေကို သီးခြားအထူးအခွင့်အရေးနဲ့ ကုသပေးဖို့ ဆရာဝန်ကြီးကို အမိန့်ပေးတော့ ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာ ဝီလ်ဘာစထရစ်လန်းက နာကျင်မှုမှာ အခွင့်ထူးခံ မရှိဘူး၊ လူတိုင်း နာကျင်မှုကို တန်းတူခံစားတတ်တယ် ဆိုတဲ့ အဲဒီစကားတစ်ခွန်းကလည်း လီဒိုလမ်းမကြီးနဲ့အတူ ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကချင်ပြည်နယ် Any Questions? အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပြီးတော့မှ ကိုယ်တိုင်မေးခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်တွေကိုရော၊ စာနဲ့ပေးပို့ပြီးတော့မှ၊ ဒါမှမဟုတ် ဗီဒီယိုနဲ့ ပေးပို့ပြီးတော့ မေးခွန်းတွေ မေးပေးကြတဲ့ လူငယ်တွေရော၊ လာပြီးတော့ ဖြေပေးကြတဲ့ ပါတီက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Any Questions? အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးကြတဲ့သူ အားလုံးနဲ့အတူ ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ ပရိသတ်တွေကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို အပိုင်းလေးပိုင်း ခွဲပြီးတော့ လာမယ့် သောကြာနဲ့ အင်္ဂါနေ့တွေမှာ DVB ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ကနေ အပတ်စဉ် ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရီရီ/ နွယ်နီတင်မောင်